स्वचालित माछा मास्क मेसिन कसरी डिबग गर्ने? यो धेरै मास्क निर्माताहरूले सामना गरेको समस्या हो जसले स्वचालित माछा मास्क मेसिन खरिद गरेका छन्, मेसिन सञ्चालन गर्ने धेरै कामदारहरूलाई टेक्नोलोजी थाहा छैन र उपकरण कसरी डिबग गर्ने भनेर थाहा छैन। त्यसोभए, कसरी डी ...
के यो वास्तवमै प्रयोग गरिएको माउथपीस मेसिन किन्न भरपर्दो छ?
२०२० को प्रारम्भमा त्यो महामारीले मास्क र माउथपीस मेसिन उद्योगमा सुनको भीड सुरु गर्यो! त्यसबेला मास्क र मास्क मेसिन उद्योगमा पैसा कमाउने गति कति बढाइचढाइ थियो? शेन्जेन एक मौलिक डु इलेक्ट्रोनिक सिगरेट चेनले व्यक्तिगत रूपमा भने, "धेरै पागल, fr...